“အိန္ဒိယနဲ့ Jamaica နိုင်ငံတို့အကြား ဆက်ဆံမှုများ စီးကိုက်ဝါးကိုက် ရှိမှုသစ်တခု” | ESD | Burmese
“အိန္ဒိယနဲ့ Jamaica နိုင်ငံတို့အကြား ဆက်ဆံမှုများ စီးကိုက်ဝါးကိုက် ရှိမှုသစ်တခု”
October 12, 2017 nitin Commentry
သောတရှင်များခင်ဗျား၊ ဒီကနေ့ သတင်းဝေဖန်ချက် အခန်းကဏ္ဍမှာ ဆောင်းပါးရှင် Vinit Wahi ဝေဖန်ရေးသားပေးပို့ထားတဲ့ “အိန္ဒိယနဲ့ Jamaica နိုင်ငံတို့အကြား ဆက်ဆံမှုများ စီးကိုက်ဝါးကိုက် ရှိမှုသစ်တခု” အကြောင်း သတင်းဆောင်းပါးကို ဆက်လက်ဖော်ပြသွားမဲ့အတိုင်း အစီအရင်ခံ တင်ပြပါရစေ။
ကာရေဘီရံပင်လယ်အတွင်း တည်ရှိတဲ့ Jamaica ကျွန်းနိုင်ငံလေးမှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Ms. Kamina Johnson Smith ရဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ အလည်အပါတ်ခရီးဟာ နှစ်နိုင်ငံအကြား အပြန်အလှန် ဆက်ဆံရေးတွေကို အားဖြည့်ပေးဖွယ် ရှိပါတယ်။ ဒီခရီးစဉ်ဟာ နှစ်နိုင်ငံအကြား အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုရဲ့ ထုထည်ပမာဏ အရှိန်မြင့်တင်ရာမှာလည်း အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ Jamaica နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတဦး အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာဒါ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီး၊ New Delhi နဲ့ Kingston အစိုးရတို့အကြား ပဥ္စမအကြိမ်မြောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ Jamaica နိုင်ငံနဲ့ ပိုမိုနီးကပ်စွာ ဆက်ဆံရေးအတွက် ထူးကဲစွာ ဆက်သွယ်နေပြီး၊ ဒီအချက်ဟာ အိန္ဒိယ ဒုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ် Dr. V.K. Singh ရဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်အတွင်း Kingston မြို့ကို နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် သွားရောက်ခဲ့ခြင်းမှ အကြောင်းအချက်တွေကနေ ထွက်ပေါ်လာဒါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Ms Smith ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mrs. Sushma Swaraj နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးတို့ဟာ နှစ်နိုင်ငံ အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုရဲ့ ရှု့ထောင့်အဖြာဖြာနဲ့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကြိုးဖြစ်ထွန်းမယ့် အရေးပါလှတဲ့ ဒေသပိုင်းနဲ့ နိုင်ငံပေါင်းစုံဆိုင်ရာ အရေးကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးတို့ဟာ ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ခရီးလှည့်လည်သွားလာမှု၊ စွမ်းရည်တည်ဆောက်မှု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ကျန်းမာရေး ခရီးလှည့်လည်မှုနဲ့ တခြားနယ်ပယ်တွေမှ ပိုမိုနီးကပ်တဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ တည်ဆောက်ဖို့ အာရုံပြုခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါ Jamaica ဝန်ကြီးက တန်ဘိုးအားဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာပေါင်း ၁၅၀,၀၀၀ ခန့်ရှိတဲ့ ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေ သူမရဲ့ နိုင်ငံကို ပေးလှူခြင်းနဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ မကြာသေးမှီက Hurricane လေပြင်းမုန်တိုင်းဒါဏ်အောက် ကျရောက်ခဲ့တာကြောင့် Jamaica နိုင်ငံကို အမေရိကန်ဒေါ်လာပေါင်း (၂) သိန်း ကူညီထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ယင်း Jamaica ဝန်ကြီးဟာ အိန္ဒိယခရီးလှည့်လည်သွားလာမှုဌာန ဒုဝန်ကြီး Mr. K.J. Alphons နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အပြင် ကျန်းမာရေးနဲ့ မိသားစု စောင့်ရှောက်ရေးဝန်ကြီး Mr. JP Nadda နဲ့လည်း တွေ့ဆုံကာ ခရီးလှည့်လည်သွားလာမှုနဲ့ ကျန်းမာရေးနယ်ပယ်တို့မှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အိန္ဒိယကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကြီး FICCI နဲ့လည်း အပြန်အလှန် ဆက်နွယ်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Ms Smith ဟာ Mumbai မြို့မှာ အိန္ဒိယထိပ်တန်း IT ပြန်ကြားရေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ကုန်သည်အသိုင်းအဝိုင်းတို့နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
အိန္ဒိယနဲ့ Jamaica နိုင်ငံတို့အကြား အပြန်အလှန် စီးပွားရေးဟာ သေးငယ်တဲ့ စီးပွားရေးနိုင်ငံဖြစ်ခြင်းနဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ အလွန်ဝေးကွာတာကြောင့် အရွယ်အစား ပမာဏ သေးငယ်လျှက် ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကာရေဘီရံပင်လယ်ဒေသပိုင်းအတွင်း နှစ်လိုဖွယ်ရာ ကုန်သွယ်ရေး စီမံချက်တခုက ကြီးထွားလာနေပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ Jamaica နိုင်ငံကို ရေစုပ်စက်တွေ မှာယူတင်သွင်းဖို့ ချေးမငွေအဖြစ် အမေရိကန်ဒေါ်လာပေါင်း ၇.၅ သန်း ထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် New Delhi အစိုးရဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ Jamaica နိုင်ငံအတွင်း ICT စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးမှု ပရိုဂျက်အရ IT ပြန်ကြားရေး ဗဟိုဌာနတခု ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ တန်ဘိုးအားဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာပေါင်း ၂၀၀,၀၀၀ (၂) သိန်းခန့်ရှိတဲ့ ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၄ ခုနှစ်အတွင်း Ivan Hurricane လေပြင်းမုန်တိုင်းဒါဏ် ခံရပြီးတဲ့နောက် အိန္ဒိယအစိုးရက ဒုက္ခသည်တွေအတွက် လူသားချင်းစာနာတဲ့ ထောက်ပံ့ကူညီမှုအဖြစ် ပေးကမ်းခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် March လအတွင်းမှာ အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ Jamaica နိုင်ငံအစိုးရတို့ဟာ Sabia Park မြို့မှာ မီးမောင်းတွေ တပ်ဆင်ဖို့အတွက် အိန္ဒိယ grant အမတော်ကြေးအဖြစ် အမေရိကန်ဒေါ်လာပေါင်း ၂.၁ သန်း ထောက်ပံ့ရေးဆိုင်ရာ MOU နားလည်မှုစာချွန်လွှာတခုကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်များအတွင်း ကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်မြှင့်မားခဲ့ပေမဲ့ ကာလကြာရှည်ခံနိုင်ရည်ရှိဒါမျိုး မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ Jamaica နိုင်ငံကို တင်ပို့ရောင်းချခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနှစ်များဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာပေါင်း ၄၃.၄၄ သန်းရှိခဲ့ဒါကို ဖော်ပြထားပြီး အဲဒီနိုင်ငံကနေ မှာယူတင်သွင်းမှုက အမေရိကန်ဒေါ်လာပေါင်း ၁.၁၇ သန်းသာ ရှိဒါကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ စုစုပေါင်း ကုန်သွယ်ရေးဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာပေါင်း ၄၄.၆၁ သန်းရှိပြီး၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်ရေးကွာဟမှုက ဒေါ်လာပေါင်း ၄၂.၂၇ သန်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိဘဏ္ဍာရေးနှစ်ရဲ့ April လမှ June လအထိ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ Jamaica နိုင်ငံကို တင်ပို့ရောင်းချမှုက အမေရိကန်ဒေါ်လာပေါင်း ၁၁.၂ သန်း ရှိခဲ့ပြီး၊ Jamaica နိုင်ငံမှ မှာယူတင်သွင်းမှု ဒေါ်လာပေါင်း ၂.၉၂ သန်း ရှိခဲ့ကာ၊ စုစုပေါင်း ကုန်သွယ်ရေးပမာဏက ဒေါ်လာပေါင်း ၁၄.၁၉ သန်းနဲပ ကုန်သွယ်ရေးကွာဟမှု ဒေါ်လာပေါင်း ၈.၃၅ သန်း ရှိခဲ့တာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ Jamaica နိုင်ငံကို တင်ပို့ရောင်းချတဲ့ ပစ္စည်းတွေမှာ ဆေးဝါးနဲ့ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ မော်တော်ယာဉ် အပိုပစ္စည်းများ၊ မိုင်းထွက်လောင်စာ၊ မိုင်းထွက်ဆီများ၊ အတည်အလိပ်၊ ချည်မျင်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများအပြင် ပလပ်စတိတ်ပစ္စည်းများ၊ အဖိုးတန် ကျောက်မျက်ရတနာများနဲ့ အတော်အတန်တန်ဘိုးရှိ ကျောက်မျက်ရတနာများ၊ လက်ဝတ်လက်စားအတုတွေ ဖြစ်ကြပြီး၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံက Jamaica နိုင်ငံမှ မှာယူတင်သွင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေမှာ အဓိကအားဖြင့် ဖျော်ရည်သာမက Organic ဓါတုဗေဒ ပစ္စည်းများ၊ သံမဏိပစ္စည်းဟောင်းများနဲ့ တခြားပစ္စည်း အသေးအမွှားတွေဘဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ ကာရေဘီရံပင်လယ် ကျွန်းနိုင်ငံတွေနဲ့ မမှတ်မိနိုင်တော့တဲ့ ရှေးဟောင်းပဝေသဏီကတည်းက ကောင်းမွန်သင့်မြတ်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေ ထားရှိနေဒါဖြစ်ပါတယ်။ Jamaica ၊ Trinidad နဲ့ Tobago နိုင်ငံ၊ Guyana Suriname စတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ရပ်ဝေးနေ အိန္ဒိယလူမျိုးနွယ်ဦးရေ အများအပြား ရှိနေဒါမို့ ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်နွယ်မှုတွေက ရှေးဟောင်းကျပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နှစ်ဖက်စလုံးတို့က ခရစ်ကတ်ကစာနည်းကို နှစ်သက်မြတ်နိုးကြတဲ့အလျောက် အဲဒီကာရေဘီရံပင်လယ်ပိုင်း နိုင်ငံတွေဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ အလွန်ဘဲ လူသိများ ကျော်ကြားလျှက် ရှိနေပါတယ်။ Melting Pot of African Asian and European Cultures သို့မဟုတ် အာဖရိကအာရှနဲ့ ဥရောပ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ပေါင်းစည်းရာနိုင်ငံလို့ ကျော်ကြားတဲ့ Jamaica နိုင်ငံမှာ အိန္ဒိယအမျိုးအနွယ် အတော်အတန်ရှိပြီး၊ အိန္ဒိယလူမျိုးနွယ် ၇၀,၀၀၀ တို့ရဲ့ ဘိုးဘွားတွေက အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့တတွေဟာ Jamaica နိုင်ငံ စုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့ ၃% ခန့် ရှိကြပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ Jamaica နိုင်ငံမှာ နှစ်စဉ် မေလ (၁၀) ရက်နေ့တိုင်း Indian Heritage Day သို့မဟုတ် အိန္ဒိယလူမျိုးများရဲ့ အမွေအနှစ်နေ့ အထိမ်းအမှတ်ကို တရားဝင် ကျင်းပလေ့ ရှိပါတယ်။ အခွန်မဲ့ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကို အင်ဒို-Jamaica လူမျိုး အသိုင်းအဝိုင်းက လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားပြီး၊ လက်ဝတ်ရတနာ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ အိမ်သုံးပစ္စည်း ဈေးကွက်မှ ကြီးမားတဲ့ အပိုင်းတခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်…စသည်ဖြင့် ဆောင်းပါးရှင် Vinit Wahi ဝေဖန်ရေးသားထားတာကို နိဂုံးချုပ် အစီအရင်ခံ တင်ပြလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျား။
ယနေ့ ဝန်ကြီးချုပ် Mr. Modi သည် နယူးဒေလီမြို့တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အာယုဗေဒ ဆေးတက္ကသိုလ်ကို ဖွင့်လှစ်ပေးသွားရန်ရှိသည်။
အီးယူ ဥရောပသမဂ္ဂသည် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကို ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်များ ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အိန္ဒိယနှင့် အာဖကန်နစ္စတန်နိုင်ငံတို့သည် နှစ်နိုင်ငံ ဗျူဟာရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လက္ခဏာများနှင့်ပတ်သက်၍ ထင်မြင်သုံးသပ်ချက်များကို ဖလှယ်လိုက်ကြသည်။
“ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဟာ အကြမ်းဖက်ဝါဒနဲ့ပါတ်သက်ပြီး သဘောထား နှစ်မျိုးနှစ်ခွ ဆက်လက်ထားရှိနေခြင်း”